Ahoana no mandaitra io
Ny sehatry ny sarimihetsika
Fanontaniana miady amin'ny famonoana akora
Ampiasao indray ilay fitaovana
Mpiorina nankatoavina TSG
Ny dokam-barotra rooftop dia misy soratra momba ny rafitry ny rafi-beny mangina
Tsidiho ny bilaoginay raha ny fanavaozana momba ny zavatra hitranga
Mampihena ny fihorakorahana ny orana amin'ny metaly na rafitry ny gorodona malefaka mafy hafa
Misy olana aminao ve ny orana?
Manana ny vahaolana isika, hamaky
Ny fahasimban'ny O2 Arena nateraky ny tafiotra Eunice. Nopotehin'ny rivotry ny tafio-drivotra tamin'ny 18 Febroary 2022 ny ampahany tamin'ny tafon-damba teo amin'ilay toerana, fantatra tamin'ny anarana hoe Millennium Dome taloha.
Fanontaniana iray apetraka amin'ny Silent Roof Ltd amin'ny regular base dia
"Manao ahoana ny fiarovana ny fametrahana Tafo mangina amin'ny toetry ny andro tafiotra?" Ny sary etsy ambony dia ny fametrahana Tafo mangina vao haingana nalaina taoriana kelin'ny nandalovan'ny rivo-doza Eunice namakivaky an'i UK. Ny fametrahana dia eo amin'ny rihana faha-10 amin'ny trano iray mibaribary amin'ny singa. Faly izahay mitatitra, araka ny hitanareo, fa tsy nisy fahasimbana vokatry ny rivo-doza Eunice na ny hafa tamin'ireo rivo-doza farany tamin'ny taona 2021-22 ity na ny iray hafa amin'ireo fametrahanay vitanay.
Zahao ny pejy Facebook eto
Ity horonan-tsarimihetsika ity dia mampiseho ny TV & Studio Group ho an'ireo installer voatendry antsika, mametraka logo misy stencil eo amin'ny tampon'ny fametrahana Silent Roof amin'ny London Film Studios.
Sary vitsivitsy mampiseho ny fametrahana Tafo Mangina eo amin'ny rihana faha-10 amin'ny trano iray. Hafa kely amin'ny toe-javatra mahazatra.
Izahay ao amin'ny Silent Roof dia mpamatsy tokana eran'izao tontolo izao an'ny fitaovana Silent Roof izay mampihena ny tabataban'ny orana avy amin'ny sehatry ny tampon-trano. Miorina amin'ny morontsiraka atsimon'i UK izahay, ny birao misoratra anarana dia any Torquay, Devon, UK. Izahay dia manao fametrahana manerana an'i Angletera izay iharan'ny fetra voafetra ary manome ny fitaovanay tsy manam-paharoa amin'ny mpiorina manerantany. Liana hiresaka aminay momba ny tetikasanao? Liana amin'ny fanondranana? Topazo maso ity pejy ity, na antsoy izahay.
Telefaona: 01803 203445 Finday: 077865 76659
Ahoana ny fomba hampijanonana ny tabataba orana eo ambony tafo.
Izahay ao amin'ny Silent Roof dia namolavola vahaolana amin'ny olan'ny fikoropanan-orana izay avy any amin'ny tafon'ny setroka mafy mankany amin'ny habakabaka na any ivelany. Mampiasa ny fitaovana momba ny teknolojia fampihenana ny orana any amin'ny onjam-peo isika toy ny Profile Metal Sheeting sy ny toy izany.
Vantany vao nametraka ny habakabaka ambanin'ny tafo fitsaboana itondrana avy hatrany dia mahazo tombony haingana amin'ny fisondrotan'ny fandotoana ny orana. Ny sary eto amin'ity tranokala ity dia fanoharana amin'ny fomba ampiharana ny SRM amin'ny rindrina Profesora Roofina iray lehibe ao amin'ny tranom-borona tantely tantely any Southall, London, tamin'ny volana septambra 2018, ny metatra 5400 metatra toradroa amin'izany.
Fampahalalana mofomamy vita amin'ny metaly - Mampihena ny ranonorana
Amin'ny toe-javatra izay misy fiantraikany ny orana amin'ny mombamomba ny metaly na ny tafo fanisan-javatra mifangaro amin'ny fiasana any ambany dia niantso anay ao amin'ny Silent Roof
manana ny vahaolana amin'ny olanao izahay. Miaraka amin'ny mpanamboatra izao tontolo izao mitana ny haben'ny insulation matrix telo dimensional ny rafitry ny rafitry ny rano, napetraka eo an-tampon'ny tafontranonao misy Dramatically hampihena ny orana alohan'ny hisehoany. Ny tabataban'ny orana amin'ireny karazana tafo ireny dia mahasorena ny tontolo maro samihafa; Ireo vondron-trano indostrialy, sekoly, sehatry ny sarimihetsika, biraon'ny varotra sy ny toy izany.Ireo sary eto amin'ity tranonkala ity dia fanoharana ny fomba ampiharana ny SRM amin'ny rindrina Profesora Roof lehibe iray ao amin'ny tranom-borona Honey Monster Fototra any Southall, London, tamin'ny Sep 2018. , ny 5400 metatra toradroa ao aminy.
Vetivety dia vita ny fametrahana akora malefaka ary ny hetsika fametrahana rehetra dia atao eo ivelan'ny trano ka tsy hanelingelina ireo hetsika eto ambany tafo.
Ny dokambarotra rooftop miloko
YES, Silent Roof Rooftop Silent azo ampiasaina amin'ny loko maro karazana. Asaivo misoratra anarana eo ambony tafo ny orinasanao. Tsy misy hosodoko, esory ary esorina amin'ny fotoana rehetra. Niorina mafy ny UV.
Tamin'ny taona 2019, nanatona ny marika manerantany izahay tamin'ny alàlan'ny orinasa nametrahantsika nametraka ny fanontaniana hoe: 'inona no loko hafa azo?'
Saingy ny fanadiovana dia tsy natao ho famonoana ny tabataba orana fa natao ho an'ny dokam-barotra an-jorony Ny sosona fototra amin'ny loko iray nopetahana tamin'ny loko mifanohitra amin'ny sary famantarana ny orinasa.
Ity tetik'asa ity dia natao ho an'ny tafo mirefy 10,000 metatra toradroa izay tsy hitan'ny tranobe avo lenta, ny sehatra fanaovana dokambarotra tonga lafatra.
Taorinan'ny fifampiraharahana sy ezaka nandritra ny volana maro tao amin'ny departemantan'ny R&D an'ny fanamboaranay any Alemana, kinova vaovao iray izay ilazantsika hoe,
Colour Silent Roof Material (CSRM) dia teraka.
Ampiasao izao ny tampon-tranonao noho ny dokam-barotra sy ny hanafoanana ny tabataba orana manelingelina miaraka amin'ity karazana tsy manam-paharoa i Silent Roof ity.
FANONTANIANA: Azo atao ve ny tahirim-bola fangatahana IRAY ho an'ny HAFA?
Ny fomba fametrahana dia manomboka amin'ny sosona fototra amin'ny loko voafantina, ny sary famantarana ny orinasa dia tapaka avy amin'ny sosona CSRM manify manify kokoa ary azo antoka amin'ny sosona fototra. Ny orinasanay mametraka dia afaka manome an'ity serivisy fametrahana ity manerantany. Manana toe-javatra mety hisitraka an'io fivoarana vaovao io ve ianao? Ho an'ny tampon-trano, dokam-barotra Mifandraisa US izao raha mila fanazavana fanampiny.
Ahoana no mandaitra ... Ny fihainoana dia mino
Ahoana no ahafahako mijanona fa ny tabataba orana no fanontaniana mahazatra tsy hainao ny manakana ny orana, fa ny Silent Roof dia hampihena ny feo mafy ho an'ny feo.
Ny horonan-tsarimihetsika fohy miankavia miankavia dia mampiseho ny fiantraikan'ny rano mihintsana ho any anaty metaly.
Izany dia manetsika ny tabataba orana ary tsy misy tombony azo amin'ny fonony Silent Roof Silamo eo amin'ny tany sarotra. TADIDIO, atsofohy ny volan'ny fitaovanao alohan'ny fanindry ny bokotra milalao. Ny fanamafisam-peo izay mahaliana sy ny video ihany koa.
Ny indostrian'ny sarimihetsika - Tsidiho ny bilaoginay
Ianao ve tafiditra ao amin'ny The Film Industry?
Ny Noise Noise ve no olana aminao? Manana ny vahaolana amin'ny fampitsaharana ny tabataban'orana isika.
Ilay roofon-drazana '
Tamin'ny lohataonan'ny 2018 dia nahazo fanontaniana izay nanontany izahay: -
"Hi ... Ity dia mety ho hafahafa. Manana trano fitehirizam-bokatra lehibe aho izay te-haneho porofo amin'ny orana ary tsy afaka mametraka na inona na inona anatiny isika, mba tsy hahomby ny fomba insulation normal. Azonao ampidirina avy any ivelany ihany ve ny akora ajan'ny tafo fanina azafady? ”
Ity famotopotorana ity dia niforona tao amin'ny fametrahana voalohany Silent Roof voalohany nifandraika tamin'ny firaketana feo tao anatin'ny indostrian'ny sarimihetsika. Nihemotra fa ny AKA 'trano fanatobiana entana' lehibe The Monster nohazoana hipetraka andian-tsarimihetsika. Andiany iray havoakan'ny Sky Atlantika io amin'ny 2019. Silent Roof dia nanolotra vahaolana amin'ny olan'ny tabataban'ny orana mivoaka avy amin'ny firafitry ny tafo mafy. Ny tabataba orana dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny hetsika fandraisam-peo ataon'ny ekipa mpanao horonantsary ao anaty seza ambanin'ny tafo fitahirizan-trano. Tena nahomby tokoa ity fametrahana ity ka ny fanontanina hafa dia narahina indray nifandraika tamin'ny Indostrian'ny Sarimihetsika. Tany am-piandohan'ny taona 2019, ny famokarana vaovao Sam Mendes '1917' avy amin'ny Storyworks dia niasa tamin'ny Silent Roof Ltd hanome, Rain Noise Reduction Technology mankany amin'ny toerana fanaovana horonantsary any amin'ny faritr'i Salisbury any UK.
Atobe mangina any Etazonia
Moffett Productions miorina any Etazonia ary efa nampiasa ny vokatra tao amin'ny studio sary mihetsika ao Houston, Texas. Hanara-maso azy ny zavatra niainan'i Moffett Productions tamim-pahalianana izahay.
Manana toe-javatra mitovy amin'izany ve ianao? Mifandraisa aminay - Manana ny vahaolana izahay - Tsy misy intsony ny fanelingelenana orana.
Manam-pahaizana manokana amin'ny TV STUDIO GROUP Ltd amin'ny firafitra vonjimaika, ny fametahana studio, ny fitsaboana akustika ary ny famokarana hetsika eran-tany. TV sy Film Studio Group dia manam-pahaizana amin'ny fametrahana tsy misy feony, ny fitsaboana akustika, ny fampidirana studio, ny fananganana trano maharitra maharitra ary ny rafitra vonjimaika toa ny; efitrano fianarana pop-up, atrikasa, efitrano fisakafoana lavitra sy fiaraha-miasa hafa. Ny fanandramana ataon'izy ireo sy ny fanoloran-tenany ho matihanina TV Studio Group Ltd. ny lafatra mety amin'ny fametrahana fitaovana Silent Roof ary nampiharin'izy ireo tamin'ny fomba mahomby ny SRM tamina trano fanatobiana entana, fitoeram-baravarana, tafo studio sy fahitalavitra Film ary izy ireo no mpanoro hevitra ny SRM.
Ny fametrahana ny fitaovana Silent Roof teo aloha dia misy famokarana sarimihetsika sy fahitalavitra maro; Sarimihetsika '1917' Sam Mendes, Ilay Batman ao amin'ny Leavesden Studios, horonan-tsary azo antoka HS2 ary maro hafa, kitiho eto hijerena fampahalalana bebe kokoa momba ny fametrahana tafo mangina tato ho ato ao amin'ny foibe fanofanana HS2 ao Brackley sy ao amin'ny London Film Studios.
Vato mangina - Fametrahana vita an-tsokosoko
Vao haingana izay dia nampiditra fametrahana milina izahay
fomba fiasa izay manana halavam-potoana midadasika na miasa amin'ny haavony dia
olana. Ny sary eo ankavanana dia rakotra tranom-borona tsy maharitra
ampiasaina amin'ny fakana sary mihetsika ho an'ny Sam Mendes WW1 epic '1917'.
Ny fitaovana iray tsy manam-paharoa izay amin'ny teny tsotra manala ny orana mihintsana amin'ny tampon-trano miakatra ambony, ny rano avy amin'ny orana dia avy eo mamakivaky ny kasa, avy eo dia mihazakazaka mankany amin'ny tampon-tafo tany am-boalohany ary mankao amin'ny rafitry ny rano.
Ny akora Silent Roof dia miorina UV. Noho ny habetsaky ny akora dia azo ampiasaina amin'ny endriny rehetra izy io na mahitsy na miolakolaka. Namolavola fomba maro ahafahana miantoka ilay akora amin'ny karazany maro izahay.
Ny tabataban'orana dia afindra amintsika amin'ny endrika onjam-peo. Mandritra ny firotsahan'ny orana dia misy isa matetika mifandraika amin'ny fiantraikan'ny rotsak'orana amin'ny tampon-trano. Ny firafitry ny tafon-trano efa misy dia ho toy ny fitaovana tsy mahazaka feo amin'ny lafiny sasany fa angamba ny fanaraha-maso ny tabataba orana dia tsy nojerena voalohany rehefa namboarina ilay tafo voaresaka. Rehefa sendra ny fiezahana mafy ny feon-drindrina manohitra ny tabataban'orana, ny fiheverana voalohany dia ny fampidirana fitaovana akustika hiadiana amin'ny habetsaky ny feon'ny feo (tabataban'orana), izay mivoaka avy amin'ny firafitry ny tafo. Ny firafitra rehetra dia hihorohoro amin'ny haavo sasany, ny takelaka tafo na metaly na mitambatra dia hitondra tena toy ny hoditry ny amponga ary rehefa misy vokany dia hamoaka feo. Moa tsy lojika ve ny fampidirana fitaovana fitsaboana akustika izay natao hiatrehana ity olana amin'ny tabataba ity.
Ny fomba mahazatra dia ny manampy betsaka amin'ny tafo. Fantatsika rehetra fa ny tampon-trano na rindrina matevina dia hisakana ny fielezan'ny feo (onjam-peo). Ka ataovy matevina kokoa ny tampon-trano mba hampihenana ny haavon'ny tabataba vokatry ny firotsahan'ny orana, tsy izany ve ny valiny miharihary? Ny lalàna malaza indrindra momba ny fanamafisam-peo dia ny Law Mass. Izany dia milaza fa amin'ny fampitomboana avo roa heny ny lanjan'ny sakana akustika dia hahazo fanatsarana 6dB eo ho eo amin'ny fanalefahana feo ianao. Raha atao teny hafa, raha avo roa heny ny haben'ny rindrin'ny biriky, ohatra, dia hahazo fanatsarana 30-40% amin'ny rindrina fanamafisam-peo ianao. Toy izany koa amin'ny tafo, fa ankehitriny tsy maintsy dinihintsika ny enta-mavesatra fanampiny efa hatolotsika, azon'ny tafo atao ve ny manohana io enta-mavesatra fanampiny io ary amin'ny vidiny sy amin'ny ezaka inona?
RAHA IZAO DIA TOKONY HIDITRA RAVITRA IZAO ARY HITANAO ATAO FANAFAHANA?
Manampy faobe ny tafo noheverina fa hamaha ny olan'ny oram-be rehefa vita izany. Ny vahaolana iray hafa dia ny fisorohana ny tabatabaan'ny orana REHEFA mitranga? Ny rafi-bolo mangina (SRM) dia manao toy izany satria rehefa napetraka eo amin'ny lisitry ny tafo eo an-tampon'ny tampon-trano misy izy io dia mandray ny orana mianjady. Ankoatr'izany, ny SRM dia milanja 800gms isaky ny metatra toradroa, ny firafitry ny tafo dia tokony ho afaka manohana ity fanampiana fanampiny ity. Ka raha tokony hampiana faobe, ahoana ny fomba fiasa Silent Roof?
Silent Roof Material (SRM) dia vokatra tokana fa amin'ny teny tsotra dia mamontsina ny orana mihintsana ny orana eny ambonin'izy io ary tsy mamindra ny fihenan'ny voka-dratsy vokarina any amin'ny tafo any ambany. Avy eo ny rano avy amin'ny orana dia mivezivezy amin'ny sisin'ny SRM avy eo ary miketrika mangingina hatrany amin'ny rindrin'ny tafo tany am-boalohany ary mankao amin'ny rafitry ny rano. Ny Roof mangina dia hampiato ny ankamaroan'ny tabatorana orana amin'ny rafi-baravarana am-bava fotsiny. Mainty hoditra ny mainty hoditra ary miorina UV. Noho ny habetsaky ny akora dia azo ampiasaina amin'ny endriny rehetra izy io na mahitsy na miolakolaka. Namolavola fomba maro ahafahana miantoka ilay akora any amin'ny velaran-tany isan-karazany izahay.
'Ny akora Silent Roof dia fitaovana iray azo refesina sy marobe, vokarina avy amin'ny filamatra polyamide mifatotra izay toerana hiampitana azy ireo mba hamorona kofehy mafy sy mivelatra. Io dia miverina amin'ny lafiny iray vita avy amin'ny filamatra ao anaty endrika tsy miangatra, roa-dimensional izay mifatotra amin'ny firafitra marobe.
Ny mombamomba ny roofing metaly vita amin'ny metaly dia voarakotra tanteraka amin'ny halavan'ny akora maintim-baravarana somary mainty, ny halavany tsirairay dia azo antoka ho an'ny mpifanolobodirindrina aminy ary voageja any amin'ny farany. Noho ny firafitra mivaingana ilay akora dia manome fanoherana ny rivotra kely ka tsy voararan'ny fiaran'ny toetr'andro.
Ampiasao - fananana tokana
Ny tranobe mangina dia azo afindra. Ity fampiasana ity dia fananana tsy manam-paharoa amin'ny Silent Roof Material (SRM). Rehefa mividy SRM be dia be ianao, dia ataovy amin'ny fahalalana fa afaka afindra amin'ny rafitry ny tafo hafa izy io rehefa mila ianao. Tsy misy izany raha ny fitsaboana hafa rehetra no nampiasaina hanamafisana ny vokatry ny tabatorana orana eny an-trano.
Ny fomba fanao mahazatra dia ny fanandramana hampihenana ny haavon'ny fandefasana ny tabataba rehefa vita izany amin'ny alàlan'ny fampidirana ny fampihenana ny sela akora (s), ohatra ny fisian'ny rafitry ny tafo.
Fitaovana tafo mangatsiaka ampiharina amin'ny ivelany ivelan'ny firafitry ny tafo, ajanony ny fihenan'ny orana izay misy fiantraikany amin'ny tampon-tafo ka hampihena ny fisian'ny orana vokatr'isa rehefa misy izany.
Manana safidy ianao hanakodia ny SRM, alefaso mankany amin'ny toerana hafa ary ampiasao izany ary hihena ny fananana ny orana, ary miverimberina indray, ary indray ... Indray mividy, fangatahana marobe.
Inona ny vokatra hafa manana ity fananana ampiasaina indray ity raha oharina amin'ny fahalotoan'ny orana? Raha ny fahalalantsika, TSY MISY.
Ny sary eo ankavanana dia ny toerana nametrahana indray ny Silent Roof Material avy ao amin'ny Monster Roof any Southall ary namerina izany tamin'ny Ignition Building taloha tao Wembley, ny sary eo ankavanana dia ny taloha sy taorian'ny Silent Roof Material efa namboarina. napetraka amin'ny tranobe Ignition taloha.
Izany rehetra izany dia natao tamin'ny andro 6 hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany.
Miorina amin'ny morontsiraka atsimon'i Angletera izahay, na izany aza, mety misy tetik'asa eritreritrao any amin'ny toerana hafa ivelan'ny UK. Raha sendra toe-javatra misy anao ianao, ny tabataban'ny orana avy amin'ny firafitry ny tafon-trano dia misy fiantraikany amin'ny sehatry ny asa na ny faritra onenana any ambany, azonay atao ny manondrana ny fitaovantsika Silent Roof mankany amin'ny toerana misy anao na aiza na aiza misy an'izao tontolo izao.
Ny fametrahana ilay akora malefaka Atiny dia fahatsorana ho azy ary ho tarihinao amin'ny dingana rehetra amin'ny alàlan'ny fanampiana an-tserasera na an-telefaona isika raha toa ka ilaina.
Ny Silent Roof Material (SRM) dia omena amin'ny bales 1 metatra ny sakany ary hatramin'ny ambony indrindra dia 60 metatra ny halavany. Ny metatra toradroa an'ny SRM dia 800g ary 17mm ny hateviny. Ny bales dia azo alefa mialoha amin'ny halavany rehetra ilainao amin'ny tetikasanao na faritra tampon-kavo iray misy fefy na barika.
Mifandraisa aminay ankehitriny ho fampahalalana momba ny vidiny sy ny fandefasana.
Finday: 07786 576659
Vitsy ny orinasa ananantsika na miara-miasa amin'izao fotoana izao
Inona ny lanjan'ny akora SR
Inona no lanjan'ny fametrahana Roof Roof Silence? Mahatratra 800g isaky ny metatra toradroa fotsiny ny lanjan'ny kitapom-bolan'ny Silent Roof. Tsy dia miserana loatra izany ka tsy hihazona rano ny orana hanampiana ny firotsahana amin'ny rindrina tafo.
Inona ny soatoavina 'U' & 'R'
Raha ny momba ny akora ataon-tsofina malemy dia tsy misy dikany ny soatoavin'ny 'U' sy 'R' rehefa mieritreritra ny fampiasana azy manokana izy io dia hampihena ny tabataba noforonin'ny rotsakorana amin'ny ranon-trano. Ny akora Silent Roof dia tsy novolavolaina mba ho vokatra insulation mafana.
Ny U-factor sy U-value dia teny miovaova manondro ny refin'ny hafanana na ny fatiantoka amin'ny alàlan'ny fitaovana iray noho ny tsy fitovian'ny hafanana anatiny sy ivelany misy ny hafanana manontany. U-factor na U-Nilai dia nantsoina koa ho an'ny fahaterenan'ny famindrana hafanana. Ny vidin'ny U-ambany ambany dia manondro fananana insulto tsara kokoa. Ny vondrona dia Btu / (hr) (ft2) (° F). Ny akora Silent Roof dia tsy natao ho insulator noho izany dia tsy nisaina ny lanjan'ny 'U' ny akora.
Fampahalalana momba ny vokatra / Sampam-panondro
Tsindrio eto raha hijery dika pdf
Haharitra hafiriana ny fametrahana
Maharitra hafiriana ny fametrahana Tafo Silent. Rehefa apetraka amin'ny rafitra Metal Metal Roofing (PMR) sy ny toy izany, ny Silent Roof Material (SRM) dia ahorona amin'ny tampon'ilay tampon-trano avy eo amin'ny eave ka hatrany amin'ny tampon'ny tampon-trano. Ny 'strip' tsirairay dia ho 1m ny sakany. Ny tsipika manaraka dia apetraka ambony ambany amin'ny tadiny voalohany ary 'stitched' miaraka amin'ny fatorana tariby PVC. Ity takelaka ity dia avadika mba hipetraka eo akaikin'ny mpifanila vodirindrina aminy ary averimberina ny fizotrany. Ny fampiasana an'io fomba io dia faritra feno tafo izay azo rakofana SRM ao anatin'ny fotoana fohy, 60 metatra toradroa isan'ora miaraka amina ekipa roa fitters no mahazatra.
Ny fotoana fandefasana Roof
Ny ora fandefasana ny Roof dia avy any amin'ny orinasa famokarana mankany amin'ny base UK dia handray anelanelan'ny 3 sy 6 herinandro aorian'ny nahazoana ny baikonao raikitra miankina amin'ny vesatry ny asa ankehitriny
Ny androm-piainana andrasana amin'ny Goro Mangina
Manana fametrahana izay efa folo taona ankehitriny izahay ary tsy mampiseho famantarana ny faharatsiana. Mba hanampiana ny fanadiovana maharitra mandritra ny fotoana lava dia atoro ny fanesorana ny fofona amin'ny matotra ara-pitaovana.
Azonao atao ny misintona ny Silent Roof Acoustic Report eto
(c) Zo rehetra voatokana 2007 - 2020 Silent Roof Ltd.
Powered by EMF Formulir an-tserasera
Misaotra tamin'ny famandrihana. Zarao ny rohy momba ny referralinao tokana hahazoana loharano hahazoana loka.